एनआरएनए अध्यक्षमा डा.बद्री केसी र महासचिवमा गौरीराज जोशीको उमेद्वारी घोषणा - Seto Page Seto Page
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले अध्यक्ष र महासचिवमा गौरीराज जोशीले महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिवद्धता पत्रमार्फत् केसीले रोजगारी, वैदेशिक लगानी, संस्थागत पुर्नसंरचना, गैरआवासीय नेपालीका हकअधिकार, सीप र प्रविधिसहितको एनआरएनए, नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धन, युवा र महिलाका मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको सहकार्य आफ्ना प्रमुख एजेन्डाका रुपमा अघि सारेका छन् ।
केसीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने, श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सुरक्षा कोष र पेन्सन फण्ड स्थापना गर्ने, विदेशमा सीप र दक्षता सिकेर नेपाल फर्केकाहरुलाई सरकारसँगको समन्वयमा रोजगारीको अवसर दिलाउने, कामका लागि मध्यपूर्व तथा मलेसियामा पुगेका महिलाहरुको सुरक्षाका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
एनआरएनएमा स्थानपना कालदेखि नै आवद्ध डा. बद्री केसी हालका उपाध्यक्ष हुन् । उनी सन् २००७ मा एनआरएन रुसको महासचिवमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । सन् २००९ र २०११ मा दुई कार्यकाल केन्द्रिय सदस्य भएपछि केसीले सन् २०१३ मा कोषाध्यक्षको जिम्मेबारी पाए ।
कोषाध्यक्षको कार्यकालमा डा. केसीले सन् २०१४ मा जापानको टोकियो सम्मलेनमा एनआरएनको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि दशवर्षे कार्ययोजना ल्याएका हुन् । उक्त कार्ययोजनामा केसीले अघि सारेको अवधारणाका आधारमा एनआरएनए आर्थिक रुपमा सबल र समृद्ध संस्थाका रुपमा विकास भएको हो ।
त्यस्तै, सन् २०१५ मा महासचिव बनेका डा. केसीले आफ्नो सक्रियतामा कम्तीमा ३० देशमा एनआरएनएको संगठन बिस्तार गरेका थिए । सन् २०१९ सम्म दुई कार्यकाल महासचिव बनेपछि केसी वर्तमान कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष बनेका हुन् । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–ा१९ को महामारीविरुद्ध लड्न राहत सामाग्री नेपाल पठाउने तथा वितरण गर्ने कार्यका लागि केसीले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसका साथै, एनआरएनएका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्बीच सम्बन्ध सुदृढ पार्न पनि केसीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
वैदेशीक रोजगारीका लागि मलेसिया र मध्यपूर्वमा गएका अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार र राहतका क्षेत्रमा समेत केसीको उत्तिकै सक्रियता छ । केसीको पहल र समन्वयमा एनआरएनएमार्फत् हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी पीडितले राहत प्राप्त गरिसकेका छन् । लामो समयसम्म एनआरएनका विभिन्न भूमिकामा निकै सक्रिय र सफल भएका कारण केसी अध्यक्ष पदका लागि केसीको उमेद्वारी निकै सशक्त देखिएको छ ।